İBB, Haydarpaşa Sirkeci Garı İhalesinde Elendi | RayHaber | မီးရထားလမ်း အဝေးပြေး | ကေဘယ်လ်ကား
ပင်မစာမျက်နှာတူရကီMarmara ဒေသကြီး34 အစ္စတန်ဘူလ်IMM သည် Haydarpasa Sirkeci မီးရထားဘူတာတွင်တင်ဒါတင်လိုက်သည်
19 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 34 အစ္စတန်ဘူလ်, ရထားလမ်း, အထွေထွေ, ခေါင်းစီးသတင်း, Marmara ဒေသကြီး, တူရကီ 1
တင်ဒါမှပယ်ချ ibb haydarpasa sirkeci gari
IMM သည်Haydarpaşa - Sirkeci မီးရထားဘူတာအတွက်တင်ဒါတင်သွင်းခြင်းမှဖယ်ထုတ်ခံခဲ့ရသည်။ İmamoğlu; "ဒီကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်ရယ်စရာပါပဲ။ ဖျက်သိမ်းရေးတရားမဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကိစ္စကိုတရားရုံးကိုသယ်ဆောင်ပြီးရာဇ ၀ တ်မှုတိုင်ကြားချက်ကိုပေးမယ်” တင်ဒါကိုတနင်္လာနေ့တွင်အယူခံဝင်မည်။
“ ယဉ်ကျေးမှုနှင့်အနုပညာလှုပ်ရှားမှုများတွင်အသုံးပြုရန်” အတွက် Haydarpasa မီးရထားဘူတာရုံ၏ပျင်းရိစရာသိုလှောင်ဒေသများကိုငှားရမ်းရန်အတွက်ပြည်နယ်မီးရထား (TCDD) တင်ဒါမှ Istanbul Metropolitan Municipality (IMM) ကိုဖယ်ထုတ်လိုက်သည်။
statement ဘီဘီစီဥက္ကamo္ဌ Ekrem amomamoğlu၊ Yenikapı Eurasian ယဉ်ကျေးမှုစင်တာ Mukhtar အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကသူ၏ကြေငြာချက်မပိတ်မှီဤဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်အကြောင်းပြချက်သည်ရယ်စရာဖြစ်သည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ Imamoglu ကပြောကြားခဲ့သည်မှာ - ငါချစ်ရသူအရမ်းပျင်းဖို့ကောင်းတယ်။ ကတိပေးထားသည့်အတိုင်းလိုအပ်ပါကကျွန်ုပ်အားအရာအားလုံးကိုပွင့်လင်းမြင်သာစွာဝေမျှရန်လိုအပ်သည်။ ငါ 16 လူဦးရေသန်း, တူရကီ 82 ပင်မြေတပြင်လုံးသမ္မတနိုင်ငံ, သင်, ငါနောက်ဆုံးနေ့ရက်တိုင်အောင်ဤမြို့ကို၏ဝိညာဉျ, ဤမြို့၏သဘာဝအလှတရား, ဤမြို့၏သမိုင်း ... အစ္စတန်ဘူလ်နှင့်အတူလိုက်ချင်ပါတယ်, ငါကပထမဦးစွာတရားမျှတစွာမြို့ဖြစ်စတင်ခဲ့သောနေ့ရက်ကာလကိုငါတိုင်းလမ်းအတွက်ရှိခြင်းပါလိမ့်မည်ကတိပေး ငါလူသန်းပေါင်းများစွာကတိပြုခဲ့သည်။
ဒါကြောင့်သင်တို့ကိုငါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလွန်ဝမ်းနည်းဖွယ်အဖြစ်အပျက်တစ်ခုမျှဝေချင်တယ်။ ဒီနေ့လည်ခင်းကိုကြည့်ပါ။ 17: 00 ရေအိုင်စတန်ဘူလ်ရှိတန်ဖိုးအရှိဆုံးHaydarpaşaနှင့် Sirkeci ဘူတာများ၏အတွင်းပိုင်းကိုမသိသောလူတစ် ဦး ပိုင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုအားမည်သည့်နည်းနှင့်မျှဖိတ်ကြားခြင်းမပြုလုပ်သောအစည်းအဝေးတွင် TL တစ်ထောင်အတွက် TL အတွက်တောင်းခံထားခြင်းမရှိပါ။ သူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုဆင်ခြေအောက်မှာတင်ဒါမဝင်ဖို့တားဆီးခဲ့ပြီးသူကငါတို့ကိုမသိဘူးလို့ပြောတယ်။ ကျွန်ုပ်ရှုတ်ချသည်မှာကျွန်ုပ်၏နိုင်ငံသားများအားလုံးရှေ့မှောက်တွင်လိုအပ်သောအရာကိုကျွန်ုပ်လုပ်ဆောင်မည်ဟုကတိပေးပါသည်။
Dünမြူနီစီပယ်တွင်3တထောင် TL လစာနှင့်အတူ 10 ထောင်ပေါင်းများစွာ၏ TL အတွေ့အကြုံကိုအားကိုးသူများသည်ထိုခင်ပွန်းKÜLTÜRAŞ၏အတွေ့အကြုံကိုလျှော့တွက်ပြီးအခြားကုမ္ပဏီများနှင့်သီးခြားစီအတွက်ဆင်ခြေပေးကြသည်။ အခုငါမေးချင်တယ်; ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့၏မိတ်ဖက်သဘောတူညီချက်အားအတည်မပြုသည့်ဤဘုတ်အဖွဲ့သည်လွန်ခဲ့သောရက်များက 15 အားတင်ဒါခေါ်ယူရန်အတားအဆီးမတွေ့ရှိခဲ့ပါ၊ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားထိုတင်ဒါတွင်အဘယ်ကြောင့်ပါဝင်ခဲ့သနည်း။ 15 ကနေ့စဉ်ဘာတွေပြောင်းလဲနေတာလဲ။
ငါ B'R ခေါ်မည်သော 16 သန်း၏ညာဘက်
မင်းရဲ့လှုံ့ဆော်မှုကဘာအပြောင်းအလဲလဲဆိုတာမင်းကိုပြောပြပါရစေ။ ကြည့်လိုက် ဦး ။ ဘယ်သူရောက်နေတာလဲ။ အကြင်သူသည်ငါ၌ 16 လူသန်းပေါင်းများစွာကိုလက်ျာဘက်ရှာရလိမ့်မည်။ အကြင်သူသည်သင့်ကိုတွေ့လိမ့်မည်၊ ငါချက်ချင်းဥပဒေရေးရာအရေးယူပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့လှုံ့ဆော်မှုကိုကျွန်တော်နားမလည်သေးဘူး။ ငါမရွှေ့ပါဘူးသူဝန်ကြီး, ငါဒီနေရာမှာ။ ငါ 16 လူ ဦး ရေသန်းကိုခေါ်နေတယ် ယခုငါနောက်ထပ်ရယ်စရာအကြောင်းပြချက်မျှဝေပါလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။
ဟာသဇာတ်လမ်းအရ "အတူတကွနှင့်အတူတကွမဟုတ်ဘဲအတူတကွနှင့်အတူတကွပေါင်းသင်းမှု" ဟုလျှောက်လွှာတွင်ဖော်ပြထားသည်။ တနည်းအားဖြင့်အစားပူးတွဲ, ပူးတွဲအစား; ဆိုလိုသည်မှာတစ်စုံတစ် ဦး သည်တူရကီဟောင်းတစ် ဦး၊ အဘယ်ကြောင့်သင်ဟာသများအတွက်လှုံ့ဆော်မှုကိုကြည့်မထားဘူး! ဒါဟာသတ်မှတ်ချက်ကိုဆန့်ကျင်ပါ! သငျသညျအခွအေနေကိုရယ်မောပေမယ့်ကံမကောင်းဒီ tragicomic ဖြစ်ပါတယ်။ အရမ်းဆိုး, အရှက်ကွဲခြင်း, နောက်ထပ်ကြီးမားတဲ့အရှုပ်တော်ပုံ။ တင်ဒါဝင်သည့်မြူနီစီပယ်ကုမ္ပဏီ ၄ ခုတွင်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များမရှိသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့အားဖယ်ထုတ်ပစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ Consortium ၏အဓိပ္ပါယ်ကဘာလဲ? Consortia ချို့တဲ့၏ပြီးစီးဘို့လုပ်နေကြသည်။ ငါပြောခဲ့သလိုပဲ ၀ န်ထမ်းတွေအဆင်သင့်ရှိနေပြီ၊ ကုမ္ပဏီရဲ့ ၀ န်ထမ်းတွေအဆင်သင့်ရှိနေပြီ၊ 'ငါတို့တင်ဒါလုပ်ပြီးပြီ၊
ကျွန်ုပ်တို့သည်တနင်္လာနေ့တွင်ရာဇ ၀ တ်မှုတစ်ခုပါ ၀ င်သည်
တနင်္လာနေ့မှာကျွန်တော်ပြစ်မှုဆိုင်ရာတိုင်ကြားချက်ကိုတင်နေပါတယ် ကျနော်တို့ Istanbul Metropolitan မြူနီစီပယ်၏ရှေ့နေများအားလုံးနှင့်အတူငါရာဇဝတ်မှုတိုင်ကြားချက်ဖြည့်စွက်ခြင်းနှင့် 'ငါပါစတာဘူလ်မှာ v ပါဝင်ဆောင်ရွက်ချင်တယ်။ ငါအချိန်ကိုသင်တို့အားသိစေခြင်းငှါငါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေများသည် 16 လူသန်းပေါင်းများစွာကိုအခွင့်အရေးရှာယူလိမ့်မည်။ ဤသည်အလွန်ကြီးမားတဲ့ပြissueနာ, ဒီပုပ်စပ်သောအနံ့၏အလွန်ကြီးမားတဲ့ပြissueနာဖြစ်ပါတယ်။ 16 သည်သန်းပေါင်းများစွာသောလူတို့၏အခွင့်အရေးကိုရှာဖွေလိမ့်မည်၊ ကျွန်ုပ်ကိုလူတွေကရွေးချယ်ခဲ့သည်။
16 လူ ဦး ရေသန်းပေါင်းများစွာ၏ပိုင်ဆိုင်မှုကိုသူ၏အရင်းအနှီးသည် 10 миң TL ဖြစ်ပြီးမနေ့က IMM တွင်ရှိသော3TL လစာ၏အထွေထွေမန်နေဂျာအားလူတစ် ဦး အားပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုကိုပေးအပ်ရခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်မှာအဘယ်နည်း။ ဒီနေရာမှာဘာပဲလှုံ့ဆော်ပါစေအခြားနေရာများသို့ပျံ့နှံ့သွားပါတယ်။ ငါတို့သူ့ကိုရှာမယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ 16 လူ ဦး ရေသန်းပေါင်းများစွာကိုအဲဒီလိုမလုပ်စေချင်ဘူး။ ဒီလူတွေကိုခွင့်မပြုရင်ဘယ်သူမှဘယ်သူ့ကိုမှHaydarpaşaနဲ့ Sirkeci ဘူတာကိုဝင်လို့မရဘူး။ ဒီအကြောင်းမင်းကိုမင်းနဲ့မျှဝေချင်တယ်။
IMM သည်တင်ဒါတင်ခဲ့သည်4COMPANY
BBB သည်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်းကို MEDYA A.T၊ KÜLTÜR A.K၊ ŞSBAK A. MET နှင့် METRO ANSTANBUL A.Şကုမ္ပဏီများမှပါ ၀ င်သည်။ Hezarfen အတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီသည်တင်ဒါတွင်လစဉ် 300 ထောင် TL လေလံတင်သွင်းခဲ့ပြီး IMM ကလစဉ် 100 ထောင် TL လေလံတင်ခဲ့သည်။
ထိုအခါHaydarpaşaမီးရထားဘူတာ Sirkeci ဘူတာကနေကွယ်ပျောက်။ 16 / 02 / 2012 2013 တွင်အစ္စတန်ဘူလ်နှင့်အန်ကာကြားရှိမြန်နှုန်းမြင့်ရထားလမ်းကိုပြီးစီးသွားသောအခါလတ်ဆတ်သောရည်ရွယ်ချက်များအတွက်သာတာဝန်ထမ်းဆောင်မည့်YıldırımYıldırımသည်Haydarpaşaဘူတာနှင့်အတူ spendstanbul ကိုသာသုံးစွဲလိမ့်မည်
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးဦးစီးဌာနHaydarpaşaရထားဘူတာစာချုပ်များတောင်းဆိုဖို့ဖြစ်တယ်! 28 / 09 / 2019 Ulaştırma Bakanlığı İBB’yi Haydarpaşa Garı İhalesinde İstemedi! : TCDD’nin Sirkeci ve Haydarpaşa garlarının bazı bölümlerini kültür ve sanat etkinliklerinde kullanılmak üzere kiraya vermek için4Ekim’de düzenleyeceği ihaleye katılacaklarını açıklayan…
အဆိုပါ Haydarpasa ရထားဘူတာပေါ့ဆÇýkmýþမှာမီး | Haydarpasa ရထားဘူတာ 10 / 11 / 2012 Haydarpaşaမီးရထားဘူတာတွင်မီးကိုလျစ်လျူရှုခဲ့သည် - သမိုင်းဝင်Haydarpaşaမီးရထားဘူတာတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သောမီးနှင့်ပတ်သက်သောအမှုအားပထမအကြိမ်ကြားနာခြင်းတွင်ပထမဆုံးဒီဂရီသမိုင်းဝင်အထိမ်းအမှတ်အဆောက်အ ဦး ကိုလိုင်စင်မရှိသောအလုပ်သမားတစ် ဦး မှပြုပြင်ခဲ့သည်။
Haydarpaşaကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်: 'Haydarpaşaနှင့် Sirkeci ဘူတာအစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်လွှဲပြောင်းသင်တန်းများမှာ' ' 02 / 10 / 2019 Haydarpaşaစည်းလုံးညီညွတ်မှု Istro Metropolitan Municipality ကိုပြောင်းရွှေ့ရန်Haydarpaşaနှင့် Sirkeci ရထားဘူတာသည်စာဖြင့်ရေးသားထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ဖော်ပြချက်; "ဟားဒ်ပါရှ်နှင့်စကီစီစီဘူတာကိုအဓိကနှင့်အများပြည်သူဆိုင်ရာရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အသုံးပြုကြောင်း Istanbul Metropolitan Municipality၊
Greve မျက်စိအလင်းယိုင်ခြင်းအတွက် Haydarpasa နှင့် Sirkeci ရထားဘူတာ 16 / 04 / 2013 Haydarpaşa ve Sirkeci Garında Grev Kırıcılığı İstanbul’da Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) ve Türk Ulaşım Sendikası’nın (TUS) ortaklaşa aldığı grevin İstanbul’da Haydarpaşa ve Sirkeci Garı’nda yapıldı. Haydarpaşa Garı’nda bir araya…
ဥပမာ: Mustafa Efeler ဟုသူကဆိုသည်:
IBB ငွေသားထုတ်ပေးသူများ၏လစာကိုယူဆောင်လာသည့် ၀ န်ထမ်းများသည် demiyormid? ဤတွင်ဟူစိန် Avni Bey တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤပုဂ္ဂိုလ်သည်လွန်ခဲ့သောတစ်နှစ်ကတိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုအောက်တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုယူခဲ့ပြီးလေးသမားဖောင်ဒေးရှင်းအားအကြံပေးခဲ့သည်။ hüseyin ဦး နှောက်သည် Erdogan မိသားစု၏သားချင်းနီးစပ်မှုနှင့်အကျွမ်းတဝင်ရှိခဲ့သည်။ 10 ထောင် ၁၀၀၀ နှင့် 350 ပေါင်ငွေအရင်းအနှီးသည်ငှားရမ်းခမည်သို့ပေးရမည်ဟူသောကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ မည်သူမျှ ibb ibn'nin ကြီး ibb ကိုမေးခွန်းထုတ်ခဲ့သည်။ Hüseyinသည်ငွေပေးချေသူအဖြစ်ပထမ ဦး ဆုံးတင်ဒါကိုသူရုတ်တရက်မည်သို့အနိုင်ရသနည်း။ Akp ၏နောက်ကွယ်တွင်ဤလူနောက်ကွယ်ရှိခြင်းသည်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးပါ။ Erdoğan Bey ၏သားဖြစ်သူ၏အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းကိုယ်တိုင်က၎င်းကိုမသိပါ။ ကုမ္ပဏီ၏ 10 ထောင်ပေါင်းများစွာ TL TL အရင်းအနှီး 350 ပေါင်တစ်ထောင်ပေါင် oduyebilir.biz ဘဏ်ချေးငွေသည်ဤတိုင်းပြည်၏အိမ်သို့ဆေးလိပ်မီးခိုးများကိုမပေးသည်။
ပထမ ဦး ဆုံးတရုတ် - ဥရောပသို့ပထမဆုံးသောရထားသည် Chang'an Kapıkuleကိုဖြတ်သန်းသွားသည်
ထိုအခါHaydarpaşaမီးရထားဘူတာ Sirkeci ဘူတာကနေကွယ်ပျောက်။
အဆိုပါ Haydarpasa ရထားဘူတာပေါ့ဆÇýkmýþမှာမီး | Haydarpasa ရထားဘူတာ
ငှားအသံတိတ် TCDD Haydarpasa ကန့်ကွက်တဲ့သူ Sirkeci ရထားဘူတာ '
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: သင်သည်သန့်ရှင်းရေးနှင့်ပိုးသန့်ဆေးန်ဆောင်မှုများ (Haydarpasa နှင့် Sirkeci, ဖွစျလိမျ့မညျ Halkalı ဘူတာရုံ)
သတင်းများ Archive လကိုရွေးချယ်ပါ နိုဝင်ဘာလ 2019 (166) အောက်တိုဘာလ 2019 (608) စက်တင်ဘာလ 2019 (557) သြဂုတ်လ 2019 (509) ဇူလိုင်လ 2019 (634) ဇွန်လ 2019 (502) မေလ 2019 (526) ဧပြီလ 2019 (419) မတ်လ 2019 (521) ဖေဖော်ဝါရီလ 2019 (483) ဇန်နဝါရီလ 2019 (502) ဒီဇင်ဘာလ 2018 (620) နိုဝင်ဘာလ 2018 (504) အောက်တိုဘာလ 2018 (435) စက်တင်ဘာလ 2018 (517) သြဂုတ်လ 2018 (486) ဇူလိုင်လ 2018 (506) ဇွန်လ 2018 (581) မေလ 2018 (467) ဧပြီလ 2018 (545) မတ်လ 2018 (554) ဖေဖော်ဝါရီလ 2018 (500) ဇန်နဝါရီလ 2018 (557) ဒီဇင်ဘာလ 2017 (509) နိုဝင်ဘာလ 2017 (426) အောက်တိုဘာလ 2017 (538) စက်တင်ဘာလ 2017 (455) သြဂုတ်လ 2017 (505) ဇူလိုင်လ 2017 (479) ဇွန်လ 2017 (477) မေလ 2017 (493) ဧပြီလ 2017 (434) မတ်လ 2017 (540) ဖေဖော်ဝါရီလ 2017 (477) ဇန်နဝါရီလ 2017 (538) ဒီဇင်ဘာလ 2016 (487) နိုဝင်ဘာလ 2016 (631) အောက်တိုဘာလ 2016 (657) စက်တင်ဘာလ 2016 (542) သြဂုတ်လ 2016 (608) ဇူလိုင်လ 2016 (485) ဇွန်လ 2016 (661) မေလ 2016 (664) ဧပြီလ 2016 (700) မတ်လ 2016 (804) ဖေဖော်ဝါရီလ 2016 (855) ဇန်နဝါရီလ 2016 (751) ဒီဇင်ဘာလ 2015 (799) နိုဝင်ဘာလ 2015 (640) အောက်တိုဘာလ 2015 (624) စက်တင်ဘာလ 2015 (428) သြဂုတ်လ 2015 (493) ဇူလိုင်လ 2015 (504) ဇွန်လ 2015 (535) မေလ 2015 (577) ဧပြီလ 2015 (622) မတ်လ 2015 (1017) ဖေဖော်ဝါရီလ 2015 (878) ဇန်နဝါရီလ 2015 (1076) ဒီဇင်ဘာလ 2014 (963) နိုဝင်ဘာလ 2014 (826) အောက်တိုဘာလ 2014 (771) စက်တင်ဘာလ 2014 (598) သြဂုတ်လ 2014 (808) ဇူလိုင်လ 2014 (911) ဇွန်လ 2014 (735) မေလ 2014 (957) ဧပြီလ 2014 (971) မတ်လ 2014 (864) ဖေဖော်ဝါရီလ 2014 (720) ဇန်နဝါရီလ 2014 (733) ဒီဇင်ဘာလ 2013 (664) နိုဝင်ဘာလ 2013 (656) အောက်တိုဘာလ 2013 (547) စက်တင်ဘာလ 2013 (570) သြဂုတ်လ 2013 (533) ဇူလိုင်လ 2013 (661) ဇွန်လ 2013 (577) မေလ 2013 (734) ဧပြီလ 2013 (1058) မတ်လ 2013 (1101) ဖေဖော်ဝါရီလ 2013 (811) ဇန်နဝါရီလ 2013 (905) ဒီဇင်ဘာလ 2012 (911) နိုဝင်ဘာလ 2012 (1167) အောက်တိုဘာလ 2012 (829) စက်တင်ဘာလ 2012 (886) သြဂုတ်လ 2012 (973) ဇူလိုင်လ 2012 (859) ဇွန်လ 2012 (591) မေလ 2012 (445) ဧပြီလ 2012 (562) မတ်လ 2012 (699) ဖေဖော်ဝါရီလ 2012 (546) ဇန်နဝါရီလ 2012 (417) ဒီဇင်ဘာလ 2011 (149) နိုဝင်ဘာလ 2011 (35) အောက်တိုဘာလ 2011 (23) စက်တင်ဘာလ 2011 (18) သြဂုတ်လ 2011 (25) ဇူလိုင်လ 2011 (18) ဇွန်လ 2011 (16) မေလ 2011 (13) ဧပြီလ 2011 (13) မတ်လ 2011 (33) ဖေဖော်ဝါရီလ 2011 (24) ဇန်နဝါရီလ 2011 (13) ဒီဇင်ဘာလ 2010 (335) နိုဝင်ဘာလ 2010 (11) အောက်တိုဘာလ 2010 (15) စက်တင်ဘာလ 2010 (12) သြဂုတ်လ 2010 (16) ဇူလိုင်လ 2010 (9) ဇွန်လ 2010 (19) မေလ 2010 (6) ဧပြီလ 2010 (3) မတ်လ 2010 (62) ဖေဖော်ဝါရီလ 2010 (303) ဇန်နဝါရီလ 2010 (1838) ဒီဇင်ဘာလ 2009 (4) နိုဝင်ဘာလ 2009 (1) အောက်တိုဘာလ 2009 (3) စက်တင်ဘာလ 2009 (3) သြဂုတ်လ 2009 (2) ဇွန်လ 2009 (3) မေလ 2009 (2) ဧပြီလ 2009 (3) မတ်လ 2009 (9) ဖေဖော်ဝါရီလ 2009 (4) ဇန်နဝါရီလ 2009 (3) နိုဝင်ဘာလ 2008 (1) အောက်တိုဘာလ 2008 (1) စက်တင်ဘာလ 2008 (2) သြဂုတ်လ 2008 (1) ဇူလိုင်လ 2008 (2) ဇွန်လ 2008 (2) မေလ 2008 (2) ဧပြီလ 2008 (1) မတ်လ 2008 (3) ဖေဖော်ဝါရီလ 2008 (5) ဇန်နဝါရီလ 2008 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2007 (2) အောက်တိုဘာလ 2007 (2) ဇူလိုင်လ 2007 (1) မေလ 2007 (1) ဧပြီလ 2007 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2007 (2) ဇန်နဝါရီလ 2007 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2006 (1) အောက်တိုဘာလ 2006 (3) သြဂုတ်လ 2006 (1) ဇွန်လ 2006 (2) မေလ 2006 (2) ဧပြီလ 2006 (2) မတ်လ 2006 (2) နိုဝင်ဘာလ 2005 (2) သြဂုတ်လ 2005 (1) ဇွန်လ 2005 (1) မတ်လ 2005 (2) ဖေဖော်ဝါရီလ 2005 (1) ဇန်နဝါရီလ 2005 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2004 (1) အောက်တိုဘာလ 2004 (3) ဇူလိုင်လ 2004 (1) မေလ 2004 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2003 (1) အောက်တိုဘာလ 2003 (1) မေလ 2003 (1) မတ်လ 2003 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2003 (1) ဇန်နဝါရီလ 2003 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2002 (1) အောက်တိုဘာလ 2002 (4) သြဂုတ်လ 2002 (1) ဧပြီလ 2002 (1) မတ်လ 2002 (2) ဇန်နဝါရီလ 2002 (2) ဇူလိုင်လ 2001 (1) ဇွန်လ 2001 (1) မတ်လ 2001 (1) မေလ 2000 (3) မတ်လ 1999 (1) အောက်တိုဘာလ 1998 (2) မတ်လ 1998 (1) သြဂုတ်လ 1997 (1) အောက်တိုဘာလ 1996 (1) သြဂုတ်လ 1996 (2) မေလ 1995 (1) သြဂုတ်လ 1992 (1) မေလ 1990 (1)